मदनकृष्ण श्रेष्ठको “फूल बुट्टे सारी” भर्जनमा ५० लाख भ्यूज, दङ्ग पर्दै भने ‘अम्मामा’ – चितवन मिडिया
काठमाडौँ । “फूल बुट्टे सारी” बोलको गीत पछिल्लो समय निकै चलेको गीत हो। यस गीतका थुप्रै कभर भर्जन समेत निकालिएका छन्। सबै जसो कभर भर्जन पनि निकै प्रख्यात भएको यस गीतलाई दिग्गज हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि गाएका थिए।
उनले आफ्नो भिडियोमा आफूसँगै अभिनय गरेकी मिथिला शर्मासँगको फोटो पोस्ट गर्दै लेखेका छन्,”ओहो !!!!!
मैले गाएको भर्शनको गीत “फूल बुट्टे सारी” को भ्युज पनि 50 लाख पुगीसकेछ आम्मामामा … …सबैको जय होस … …
मेरो धोत्रो स्वरलाई पनि माया गरेर 50 लाख भन्दा बढी दर्शकश्रोताहरुले सुनी हेरीदिनुभएकोमा सबैलाई 50 करोड पटक धन्यबाद छ।”
युगान्डाकी गायिकाको स्वरमा ‘फूलबुट्टे सारी’, मदन कृष्ण श्रेष्ठले खुलेरै गरे प्रशंसा !
काठमाडौँ – विभिन्न भर्सनमा सार्वजनिक भएर भाइरल भइसकेको ‘फूलबुट्टे सारी’ को कभर भर्सन पनि भाइरल भएको छ। युगान्डाकी गायिका डे क्याप्टेन वियोन्से फाम्सीले गाएको ‘फूलबुट्टे सारी’ को कभर भर्सन भाइरल भएको हो।
शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त कभर भर्सन युट्युब र टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ। भिडियो सहित सार्वजनिक भएको कभर भर्सनमा वियोन्से फाम्सी आफैं देखिएकी छन्।
गीतको कभर भर्सन सुन्ने अधिकांशले वियोन्सेको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। ‘फूलबुट्टे सारी’ को एक भर्सन गाएका वरिष्ठ हाँस्यकलाकार तथा गायक मदन कृष्णले पनि वियोन्सेको प्रशंसा गरेका छन्।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै श्रेष्ठले वियोन्सेको खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्। श्रेष्ठले लेखेका छन्,””कति राम्रो, कति मिठो, राम्री पनि कति । सुहाएको पनि उस्तै”bigulnews